Muvhuro, September 21, 2020 Muvhuro, September 21, 2020 Madelyn Wing
Chitatu, Kurume 18, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu takabvunzurudza Scott Brinker nezve ake ari kuuya Ekushambadzira Technology Musangano, Martech. Chimwe chezvinhu zvandakakurukura yaive huwandu hwemabhizinesi asingaise nzira nekuti zano ravo razvino rinoshanda. Ini handina mubvunzo kuti makambani ane, semuenzaniso, rakakura izwi remuromo vatengi, vanogona kuve nebhizinesi rinokura uye rinobudirira. Asi izvo hazvireve kuti dhijitari rekushambadzira zano harizovabatsira. Dhijitari yekushambadzira zano inogona kubatsira tarisiro yavo mukutsvaga iyo
Iwo Makiyi manomwe kuDiki Bhizinesi Kutengesa uye Kushambadzira
Chitatu, September 17, 2014 Chipiri, Gunyana 16, 2014 Douglas Karr
Tichiri kubatsira mabhizimusi makuru nekutengesa kwavo uye kushambadzira kwavo, isu tiri bhizimusi diki pachedu. Izvi zvinoreva kuti isu tine zvishoma zviwanikwa uye sevashandisi vanobva, zvakakosha kuti tive nevamwe vatengi vanotora nzvimbo yavo. Izvi zvinoita kuti tikwanise kudzora kubuda kwedu kwemari uye kuchengetedza mwenje kuvhenekerwa! Mamiriro akaoma, zvakadaro. Isu tinowanzo kuve nemwedzi kana miviri yekugadzirira kuenda kwemumwe mutengi uye kukwira kweiyo
Gore reSocial Bhizinesi Diki
Muvhuro, March 3, 2014 Douglas Karr
Pese pandinonzwa kuti mumwe munhu arikutanga bhizinesi kana kuti vane ravo bhizinesi diki, ini ndinobva ndavaremekedza. Mabhizimusi madiki anoita huwandu hwenzvimbo yedu yekuwedzera uye isu tese tinoshanda nesimba kusimudza mumwe mugungwa rema goliath. Ini ndinowanzo tendera pamabhizinesi madiki zvakanyanya nekuti mutengi wese kiyi mutengi ... hazvisi zvekungovimbisa, ichokwadi. Mabhizimusi madiki ari kutendeuka
Chikamu chekucherechedza mukana wekushambadzira kunzwisisa mashandisiro anoita vatengi vako zvigadzirwa uye masevhisi. Vashandi vedu vari kushanduka zvinoshamisa mudiki uye epakati-saizi bhizinesi chikamu (SMB) chikamu. Kana bhizinesi rako richishandira SMB's, unofanirwa kuona kuti simba rekushanda riri kure uye maturusi ekubatana aripo kuti uwane zvakakwana zvigadzirwa zvako nemasevhisi. Kana iwe uri B2C, nzwisisa kuti maawa ebasa ari kuchinja uye maitiro ekutenga ari kuchinja. Nepo zvitoro zvekutengesa zvichishanda